General Odowaa Oo Lagu Weeraray Duleedka Magaalada Kismaayo. – Bogga Calamada.com
General Odowaa Oo Lagu Weeraray Duleedka Magaalada Kismaayo.
Generalka lagu magacaabo Odowaa Yuusuf Rage oo ah taliyaha guud ee maleeshiyaadka kooxda Farmaajo ayaa ka badbaaday isku day dil ka dib markii weerar culus lagula eegtay deegaan dhaca duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose.
Guutada madaafiicda xarakada shabaabul Mujaahidiin oo si dhow isha ugu hayay socdaalka taliyaha guud ee maleeshiyaadka dowladda federaalka uu ku tagay magaalada Kismaayo waxay weerar culus oo madaafiic ah ku garaaceen saldhig ciidanka dowladda ay ka samaysteen deegaanka Baarka ee dhaca duleedka magaala xeebeedda Kismaayo.
Ilo wareedyo masuul ah waxay xaqiijiyeen in madaafiicda ay gudaha u galeen saldhigga balse uu si dirqi ah kaga badbaaday taliyaha ciidanka waxa loogu yeero xoogga waxaase goobta dhimasho iyo dhaawac ku noqday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Farmaajo iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland.
Dad goobjoogeyaal ah waxay sheegeen in madaafiicda ay ku dhaceen gudaha xerada ayna arkayeen qiic iyo uura madow oo cirka isku shareertay hawada deegaanka Baarka waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday 13 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka dowladda.
Inta la ogyahay waxaa weerarkan madaafiicda ah lagu dilay 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo dhaawaca 9 kale kuwaas oo ku sugnaa saldhiggan lagu weeraray taliyaha maleeshiyaadka federaalka ninka lagu magacaabo Odowaa.
General Odowaa waxa uu dhowr jeer ka badbaaday weeraro lagu khaarajin lahaa oo ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay kula eegteen saldhigyo dhowr ah oo kuyaal koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.